ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အဘယ်မျှ To Dateြ– Old School ပုံစံ
အဘယ်မျှ To Dateြ– Old School ပုံစံ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: စက်တင်ဘာ. 25 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
Value ကိုအပြင်နီးပါးအရာအားလုံးလွှဲပြောင်းယူနေပါတယ်, ယခု Added ကယ်လစီယမ်ပါဝင်ပါတယ်သောအရာလွင်ပြင်သရက်သီးဖျော်ရည်မှ, တိုးတက်လာသောဖော်မြူလာနှင့်ဖွဲ့ခဲ့ထုတ်ကုန်ရောင်းသောကုန်စုံစတိုးဆိုင်. သေး, ဆဲအဟောင်းကျောင်းကိုပိုနှစ်သက်ကြသူများရှိ, ကဆက်ဆံရေးကိုကြွလာသောအခါ၌ပင်?
သို့သော်, စပျစ်သီးကိုကြားဆက်ဆံရေးကိုအကြံဉာဏ်နေဆဲအသစ်-အသက်အရွယ် mantras ၌ရေကိုကိုင်ထားနိုင်? ရွှေကဲ့သို့အဖိုးတန်ဖြစ်ပါသည်? ထွက်ရအောင်.
အသက်ရှင်လျက် chivalry Keep
မည်သည့်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကိုမေးပါ, သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားများအတွက်ထိန်းသိမ်းထားသောအရိုသေလေးစားမှုကိုသူတို့ click နဲ့သူတို့အများဆုံးဖွယ်ရှိဖော်ပြထားခြင်းလိမ့်မယ်ဖန်ဆင်းသောအရာကို ပတ်သက်. ရှည်လျားသောနှင့်အောင်မြင်သောဆက်ဆံရေးအတွက်ခဲ့သောသူ. အမျိုးသမီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတန်းတူရေးအတွက်တိုက်ပွဲဘာလို့လဲဆိုတော့, ထိုသူတို့သည်စ chivalry တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ. အမျိုးသမီးတစ်ဦးနေဆဲကုလားထိုင်ကိုထုတ်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့သို့မဟုတ်တောင်မှသူတို့အဘို့တံခါးကိုဖွင့်လှစ်သူတစ်ဦးလူကြီးလူကောင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ကိုချစ်လို. ထိုမိန်းမသည်အဘို့ဤအကျင့်ကိုကျင့်ရိုသေလေးစားမှုကိုပြသထားတယ်နှင့်ပင်လက်ထပ်ပြီးနောက်ဆက်လက်သင့်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်.
အမျက်တော် ထွက်. အအိပ်မထားပါနဲ့
အငြင်းအခုံခဲ့ကြသူစုံတွဲများအမြဲတညဉ့်ကတောင်းဆိုမီအေးအေးဆေးဆေးထုတ် sort ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်. သို့သော်, တကိစ္စရပ်များထွက် sort နိုင်မီ, ပထမဦးဆုံးဆင်းမငြိမ်သက်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးစနစ်ဖြစ်ပြီး-up ကပြည်နယ်အတွက်အဖြေတစ်ခုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေမှသာအခြေအနေကို ပို. ဆိုးရွားလိုသည်အတိုင်း. သူတို့ကအစအငြင်းအခုံသူတို့လေးစားလိုက်နာသူတို့နဲ့မေတ္တာ၌ရှိကြ၏တစ်စုံတစ်ဦးသည်အဘယ်သူကိုနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသတိရသင့်တယ်, ငွိမျးခမျြးဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့ထို့ကြောင့်၎င်း၏အရေးကြီးသော.
လူနှစ်ဦးချိန်းတွေ့စတင်လာတဲ့အခါ, သူတို့ခဏခဏအထူးခံစားရကြောင်းသေချာစေရန်ကြိုးပမ်းသည့်အောင်, မေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်စုံမက်နှင့်အတူမိုး . ဆက်ဆံရေးကိုကြာရှည်စွာများအတွက်, သို့သော်, စုံတွဲများကတိကဝတ်များ၏တူညီသောအဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်. အားလုံးဆက်ဆံရေးအတက်အကျရှိ, အတော်လေးပုံမှန်ဖြစ်သည့်. သို့သော်, သူတို့ဆက်ဆံရေးထိုင်ခုံနောက်ကျောကိုယူပါစေဘယ်တော့မှမပေးသင့်. သူတို့ကအဖြစ်ရှေ့တော်၌ထိုတူညီတဲ့အသက်ရှုအတွက်ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ပေးသင့်, ဒါကြောင့်အဲဒီအချိန်ကသူတို့ကိုအတူတကွကိုစောင့်သောအရာတစ်ခုခုသည်နှင့်နေဆဲလာရန်ကာလ၌အတူတကွသူတို့ကိုစောင့်နိုင်သောကြောင့်.
တစ်နေ့တစ်ဦးကိုအထူးချီးမွမ်း sharing မပါဘဲအနားမှာရှောက်သွားစေခြင်းငှါမကြိုးစားကြည့်ပါ. ဒါဟာသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်တစ်ခုအတွက်မည်သို့အပေါ်ချီးမွမ်းဖြစ်နိုင်, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အတန်ဖိုးထားကြသည်ဘယ်လောက်ပင်အနံ့သို့မဟုတ်မည်မျှ. သူတို့ရွှေစင်ထက် သာ. အဖိုးထိုက်နေသောသူတို့ကိုပြောပြပါ. တဦးတည်းကသူတို့ချီးမွမ်းနှင့်အတူစိတ်ရင်းမှန်ပြီးဖြစ်ရန်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာဆက်ဆံရေးကျိုးနပ်ပါစေသောထိုအမှုအရာသည်နည်းနည်း. ဒီအကြံပေးချက်ကိုစပျစ်သီးဖြစ်စေခြင်းငှါ, , ဒါပေမယ့်အားလုံးလက်ရှိဆက်ဆံရေးကိုအံ့ဘွယ်သောအမှုအလုပ်ဖြစ်တယ်.
တစ်ဦးနှုတ်ဆက်နမ်းသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုခံစားစုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ဤမျှရိုးရှင်းပြီးအရေးမမြည်စေခြင်းငှါမျှဝေအဖြစ်အဖြစ်တာ, ကနွေးထွေးမှုတွေအများကြီးနောက်ကွယ်မှတွေအများကြီးနဲ့အရွက်ကိုဆိုလိုသည်. တစ်ဦးနှုတ်ဆက်နမ်းမျှဝေခြင်း၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်နှင့်အတူရှိနိုင်ပါသည်ဘယ်လောက်ချစ်ခင်တဦးကိုပြသဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်. ထို့အပြင်, ဒီနေ့စဉ်လုပ်နေကြဆက်ဆံရေးခိုင်မာစေရန်ကူညီပေးသည်, ဒါကြောင့်သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအဘို့အခံစားရမေတ္တာကိုရောင်ပြန်ဟပ်ပြအဖြစ်.
အတူတကွအစားအစာများကိုယူပြီးအားရင့်ကျက်စုံတွဲများအကြားနှောင်ကြိုးစောင့်ရှောက်ရန်ကူညီပေးသည်. တဦးတည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထမင်းစားခန်းမှာစားရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရှောင်ရှားပါ, အခြားတစ်ဦးမှထိုင်အခန်းမှာနေစဉ်, ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်. ဒါဟာမဆိုဆက်ဆံရေးတိုးတက်မှုအတွက်ကျန်းမာမဟုတ်ပါဘူး. အတူတကွအစားအစာများယူခြင်းစုံတွဲတစ်တွဲစကားပြောခန်းဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏. သို့သော်, စကားပြောဖို့ chat ဘောဇဉ်တစ်ခုပျော်စရာတစ်လုပ်သင့်ကြောင်းသတိပြု, အရာပွတ်တိုက်အားကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းအကြောင်းအရာများနှင့်ဆင်ခြေရှောင်ကြဉ်သင့်သည်ကိုဆိုလိုသည်. အတူတူအစားအသောက်ယူပြီး၏အနှစ်သာရအနားယူရန်ဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်အကြောင်းစကားပြောခန်းမှပျော်စရာအကြောင်းအရာအသစ်များကိုရွေးချယ်ပါ.
တစ်ဦးကအစဉ်အမြဲသူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်တိုးတက်စေခြင်းဖြင့်အပိုမိုင်သွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်, သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအတွက်ကြည့်ကောင်းရှုကောင်းအတိုင်း. okay, ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝတ်စုံတစ်ခုသို့မဟုတ်ကော့တေးဝတ်စုံများအတွက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ donning မှာအားလုံးအဆင်ပြေသံမစေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်သန့်ရှင်းသောကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း, ကောင်းသောရှာဖွေနေနှင့်အတူတကွကောင်းမွန်စွာ-သွင်းထားရအရေးကြီးသောဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာတဦးရဲ့လက်တွဲဖော်အဘို့အကောင်းကိုကြည့်ဖို့သိပ်အားထုတ်မှုမယူပါဘူး, ဒီဆက်ဆံရေးခိုင်မာအားအထောက်အကူပြုမယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်, မိတ်ဖက်တစ်ဦးစီတစ်ဦးစီအသက်ရှင်လျက်အခြားအဘို့မိမိတို့စိတ်အားထက်သန်စောင့်ရှောက်နိုင်လိမ့်မည်အဖြစ်.
ဟောင်းနွမ်းသောဤဆက်ဆံရေးကအကြံပေးသည်မှတဆင့်ထက်ရွှေစင်ကြောင်းသက်သေပြစရာမပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းရှိပါတယ်. ရွှေစင်အဖိုးတန်သတ္တုနှင့်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါသည်. တူညီတဲ့အသက်ရှုအတွက်, ဤစပျစ်သီးကိုလက်ရှိဆက်ဆံရေးကိုရန်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောများမှာအားအကြံပေး. ထိုကွောငျ့, ဤအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲရှင်သန်နေမီးပွားထားရန်ဆက်ဆံရေးရှိတော်မူသောမည်သူမဆိုများအတွက်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူပထမခြေလှမ်းများကို ယူ. နည်း